Ndị na-emepụta ihe nkiri nke Plywood & Fancy Plywood- Roc
FILM IWU PLYWOOD
OSB (AKW BOKWỌ AKWRKWỌ AHRI)
Iji Ihe Obu
Lọ / kọbọd Jiri
Anyị arụpụtaghị nile di iche iche nke osisi panel bụ 1,000,000m3 kwa afọ. Mere iji na-amị ma na-ebupụ ndị kasị mma ngwaahịa na fim chere ihu plywood, fancy plywood, antiskid plywood, MDF, OSB na LVL ngwaahịa.
Dị ka a na-eduga emeputa na whsaler nke plywood, MDF, OSB na LVL, anyị na-kwara na-na-ebute ụzọ nke nkà na ụzụ na àgwà. na-aga n'ihu na-emeziwanye akụkụ niile nke ogwe osisi anyị. Anyị anụ ọkọnọ-enyere gị aka inweta a ike ọnọdụ na mba ahịa na ana achi achi a ogologo oge ibu.
OSB (Agbakwunyere eriri osisi)
Mbupụ ruo Dtae
Anyị Bipụtara Mbupụ gaa
Anyị ejeela ozi
Ndị na-emepụta ihe na-arụ ọrụ okporo ụzọ na akụrụngwa.
Ngwaahịa a tụkwasịrị obi
AAA ụlọ ọrụ
Ọrụ ROCPLEX Sourcing Agent
Worry ka na-echegbu onwe gị maka ihe eji ewu ụlọ si China? Mgbe ahụ ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịhọrọ gị. Ihe ROCPLEX bụ nke otu ọrụ ịzụ ahịa na-akwụsị ga - enyere gị aka isi na China pụọ ​​n'ụzọ atụghị anya ma dịkwa ịtụnanya.
N'okpuru ebe a BANYERE ị nwere ike ịnụ ụtọ…
Ofesi ụlọ ọrụ
Ngalaba na-azụ ihe magburu onwe ya na ngalaba njikwa mma, na n'ezie, ọkachamara ahịa. Yabụ ROCPLEX nwere ntụkwasị obi zuru oke iji bụrụ ngalaba ntụkwasị obi ị ga-ahụ maka ịga mba ofesi. Afọ 25 nke ịzụ ahịa ezinụlọ osisi ka anyị nwee obi ike ịme ezigbo ọrụ n'ịrụ ụlọ ịzụta ihe ngwaahịa.
ROC International, ụlọ ọrụ na-ebubata ngwaahịa na mbupụ ntụkwasị obi, nwere afọ 25 nke ahụmịhe na ọrụ ụlọ ọrụ ibubata na mbupụ. ROC ọkachamara mba ụwa na ngwaahịa osisi, Karịsịa na azụmaahịa ogwe osisi. 25 afọ osisi panel n'ichepụta na exporting emezu a ọkachamara otu na osisi ngwaahịa mbubata na mbupụ na àgwà nnyocha.
A klas mbubata na mbupụ enterprise na omenala, na magburu onwe omenala nwechapụ ọsọ na ike, mụ na tozuru okè ọrụ otu, na-enye gị magburu onwe na-echebara mbubata na mbupụ gị n'ụlọnga ọrụ.
Home World Group bụ onye nrụpụta kasịnụ na mbupụ plywood na ngwaahịa ndị metụtara ya na China, nke hiwere na 1993 nwere ndị enyemaka 6. Ugbu a, anyị na-ekpori ndụ usoro ihe nkiri 73 nke plywood fancy plywood na LVL. Na ụlọ ọrụ nkwonkwo ngwaahịa 12 na OSB, MDF na melamine board rụpụtara.
ekpuchi ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke China.
Ihe karịrị 25 afọ ahụmahụ mepụtara maka osisi panel OEM ahịa.
Kemgbe ahụ, otu ogwe osisi OEM anyị na mba 50 gafere mpaghara ise.
A nabatara iwu OEM / ODM. Anyị nwere nnukwu uru na R&D, omenala mere nke osisi osisi ngwaahịa karịsịa na plywood na melamine osisi.
Na ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na iso ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ site na ụwa niile, a na-ele anyị anya dịka onye mmekọ a pụrụ ịdabere na ya n'ihi ogo nke ahụmịhe na nka enyere na mmepe, imewe na nkwado azụmaahịa nke ngwaahịa ha.